01 / 11 / 2017 01 / 11 / 2017 ဂရေဟမ် 1225 Views စာ0မှတ်ချက် NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego စတိုး, shop.LEGO.com
ဒီနေ့မျှော်လင့်ထားတာတွေအများကြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် Lego Ideas အစုံ, NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ.
NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ ပရိသတ်များအနေဖြင့်အမိန့်ရန်ယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ Maia Weinstock ကစီမံကိန်းကိုတင်သွင်းတဲ့ပရိသတ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ပါ Lego Ideasနှင့်ယခု Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ထိုတင်သွင်းမှုကိုလွှတ်ပေးရန်အစုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
ဒီသိပ္ပံပညာရှင်လေးယောက်ဖြစ်တဲ့ Margaret Hamilton၊ Nancy Grace Roman, Sally Ride နဲ့ Mae Jemison တို့ဟာအထင်ကရအမျိုးသမီးများရဲ့သေးငယ်သောရုပ်ပုံများနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ vignette သုံးခုပါရှိပါတယ်။ The Brick Fanatics ပြန်လည်သုံးသပ် ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်ကိုချီးကျူးခဲ့သည်။NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်”
ပေါင် ၁၉.၉၉ နဲ့ ၂၃၁ ပိုင်းနဲ့ \_ t NASA ၏ 21312 အမျိုးသမီးများ ပိုက်ဆံများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ဖိုးကိုပေးထားပါတယ်။ နံပါတ်တစ် Lego Ideas အစုံအပါအဝင်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည် 21310 ဟောငျးငါးဖမ်းဆိုင်, 21307 Caterham ခုနစ် 620R, 21306 အဝါရောင်ရေငုပ်သင်္ဘော နှင့် 21308 စွန့်စားမှုအချိန်.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်ဆံခြင်း
အဆိုပါ Is LEGO Group အဆိုပါ aftermarket ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်? →